Iingelosi kunye needemon iiTattoo | Ukuzoba
Nat Cerezo | | IiTattoos zonqulo
Ngaphakathi kwihlabathi leetattoos, ukuba sithetha ngetattoos zonqulo okanye "zokomoya", zombini iingelosi zeetatoo kunye neetatoos zeedemon ziyaziwa. Kwaye kunjalo yenye yezona zimelo zidumileyo kolu luhlu lweetattoos.
Kungenxa yoko le nto namhlanje sifuna ukuthetha ngetattoos zeengelosi needemon. Sijonge izizathu okanye izizathu ezinokuthi zikhokelele umntu kuzo zombini iidemon kunye nengelosi. Kwaye ukuba unomdla kwisifundo, ungalibali ukufunda le posi malunga Iingelosi eziphefumlelweyo.
1 Intsingiselo yeetattoos zeedemon
2 Iingcamango zeetatoo zeedemon
2.1 Iidemon ezindizayo
3 Intsingiselo yeetattoos zengelosi
4 Iingcamango zengelosi zetattoo
4.1 Ingelosi yokufa
4.2 ingelosi yokukhokhela
4.3 Ingelosi ewile
4.5 Iingelosi zamaphiko
4.6 Olunye uhlobo lweengelosi
5 Iingelosi ezixubileyo kunye needemon
6 Iifoto zeengelosi kunye needemon iiTattoos
Intsingiselo yeetattoos zeedemon
Kwimeko yeedemon, ushiya ecaleni ukubhekisa kubuSathana okanye kubuhedeni ukuba uninzi lwabantu abamlandelayo ngokuyinxenye abayazi imvelaphi yabo, iitattoos zeedemon zibekwe njengophawu olucacileyo lokuchasa. Indlela yokubonisa imvukelo yethu ngolungelelwaniso lwentlalo olukhoyo namhlanje kuninzi loluntu. Kwabanye abantu, ii-tattoo zeedemon luphawu lobubi, lokuziphatha kakubi, okanye ukuzingca okukhoyo kwimeko yomntu.
Iingcamango zeetatoo zeedemon
Ukuba ezakho ze I-satanases evela esihogweni kwaye ufuna ukwenza i-tattoo enye yazo kulusu lwakho, Silungiselele iimbono ezimbalwa ukukhuthaza.
Zininzi iindlela zokumela idemon, kodwa zihlala zinobume obunobuntu kwaye banokuba okanye bangabinayo amaphiko. Oko kukodwa kuyothusa, kodwa ngoku khawufane ucinge ukuba yintloko enamaphiko ... ukuba sifumene into enjalo, sinokuqala ukubaleka ukwehla intaba. Ewe, njenge tattoo ipholile kakhulu.
EJapan bakwanazo neenguqulelo zabo zeedemon. Ziyaziwa njenge I-oni nembonakalo yazo iyafana naleyo yeedemon zasentshona okanye ii-ogres. Zimelwe ngozipho kwaye, ngokubanzi, zinophondo olunye okanye ezimbini. Umbala wolusu lwabo uhlala uhluka phakathi kobomvu, bhlowu, pinki, mnyama okanye luhlaza.
Ukuba nembonakalo eyoyikekayo bahlala benxiba izikhumba zehlosi kwaye banxibe a kanabō, isixhobo esasetyenziswa ngamaxesha obukrelekrele kunye nokubandakanya abasebenzi ababhinqiswe ngentsimbi abanee-studs.
Ezi zinto zimelwe kwinkoliso yama-manga kunye nee-anime. Nokuba kwimidlalo eyahlukeneyo yevidiyo, enje ngeCD Projekt yamva nje, Cyberpunk 2077, apho ilogo yebhendi yeSamurai iyi-onb ye-cybernetic.
Kubonakala ngathi eli gama hyee (exhomekeke kulwimi kunye nendlela esetyenziswa ngayo inokuba neentsingiselo ezininzi) yile esetyenziswe ngabaphandi bezicelo ukuzisa ukuhla kweetemplars njengabaqhekeki.
Nangona kunjalo, Kwezinye izicatshulwa zeTemplars iBaphomet ichazwa njengoluhlobo lomtyholi, hermaphrodite, mnyama ngombala, ngamabele, iindevu neempondo. Nangona kubonakala ngathi olu lwazi lunokuchazwa gwenxa yifashoni yobugqi phakathi nasekupheleni kwenkulungwane yeshumi elinesithoba.
Intsingiselo yeetattoos zengelosi
Ukuqhubela phambili kwiiTattoos zeengelosi, zibonisa inkolo evulekileyo kwaye ixhaphake kwihlabathi laseNtshona. Iingelosi zithatha ukubonakala kwabantu abanamaphiko abanomsebenzi wokuhambisa ilizwi likaThixo eluntwini. Ziqulethe ukuthanda kukaThixo, ubabalo, ubuhle kunye nokugqibelela.
Nangona ingeyiyo yonke into malunga neengelosi enxulunyaniswa nobuKatolika, kuyinyani ukuba yinkolo leyo enoluvo olunzulu lweengelosi. Kodwa ngokumangalisayo igama elithi "ingelosi" livela kwisiLatin "Angelus”Esivela kwelesiGrike" λελος "(iingelosi) elithetha" umthunywa ". Kubonakala ngathi eli gama lalisele lisetyenziswa kwisithixo samaGrike sika-Angelia, owayengumthunywa woothixo nentombi yothixo uHermes.
Iingcamango zengelosi zetattoo
Iitattoos zengelosi Ayisiyiyo nje kuphela eyonwabisayo kwaye igcwele ngamaphiko kaThixo, iihalos kunye nemithaNgamanye amaxesha banokuba ngabona bangendawo. Silungiselele intwana yayo yonke into ukulungiselela olu khetho.
Kubonakala ngathi phakathi kwamaJuda namaSilamsi igama elinikwe ingelosi yokufa nguAzrael, one-mission yamkela imiphefumlo yabafileyo uyise ekugwetyweni. Kwiitattoo, zihlala ziboniswa njengamathambo anamaphiko.
KubuKristu, Nangona kungekho sihloko sithile sengelosi yokufa, lo msebenzi uwela kwingelosi enkulu uMichelangelo. Ngamanye amaxesha ukufa kuxubene nesithunywa sezulu ukunika ukubamba esikubonayo kumvambo olandelayo.
Olu hlobo lwengelosi luxhaphake kakhulu kubuKatolika. Kukholelwa ukuba umntu ngamnye unengelosi emkhuselayo emkhuselayo kwizilingo ukuze angene ezulwini. Inokuba ngumntu esimthandayo osandula ukusweleka kwaye ujonge ukhuseleko lwethu. Ihlala ibonakaliswe njengengelosi ejonge ezantsi, ngokungathi iyasikhathalela.
Ngakolunye uhlangothi, singadibanisa uhlobo lwengelosi olondolozayo lwe tattoo kunye nento encinci yokulwa ukwenza itattoo elandelayo. Ingelosi ebonakala ngathi ikhusela amangcwaba amabini, elo lomfazi nelomama womntu obhalwe umvambo.
Ingelosi ewileyo ikhutshiwe ezulwini, ke amaphiko akhe aqhawuka ngenxa yokuvukela uThixo. Kukho iingelosi ezininzi eziwileyo, umzekelo, ezaziwa njengoGrigori, Mephistopheles (oboniswe kwiklasikhi kaGoethe), uSemvazza kwaye, mhlawumbi owaziwa kakhulu, nguLucifer. Le tattoo ibonisa imvukelo, inyani yokungafuni ukulandela imiyalelo yomntu.
Igama ikerubhi kubonakala ngathi ivela kwisiHebhere ikerubhi, ezinokuthi zithethe okulandelayo okanye imizuzwana, oku kubhekisa kwiikwayara zeengelosi ezikhokela iiserafi. Kuphela ngabo bakwimeko yokuphakama okunje abanokubona iikherubhi ukuba isibhakabhaka sinokufikelela kuzo. NgokweBhayibhile, iikherubhi ziphethe ukudumisa uThixo. Kwinqanaba le tattoo, ikerubhi inika imvakalelo yokulunga, ngokungafaniyo nee-tatoos zeengelosi eziwileyo okanye ingelosi yokufa.
Enye indlela ye tattoo ngamaphiko engelosi. Zininzi ii-tatoo ezinjalo, kodwa zihlala ziitattoo ezimbini ngasemva ezimele amaphiko omabini. Le tattoo ifihla iintsingiselo ezininzi, kunokuthetha ukuba umntu obhalwe umvambo ufuna inkululeko, okanye ukhumbula umntu ongasekhoyo.
Olunye uhlobo lweengelosi
Njengoko sihlala sikuxelela, ukucinga kwakho ngumda. Umzekelo, Kule meko, omnye umntu uye wacinga ngokuxuba u-Igor kunye nengelosi ukuze amnike lo mcingo.
Sikwanomnye umzekelo wengelosi, ukudibanisa intombazana ekwixesha langoku okanye isitayile seArt Nouveau enamaphiko engelosi. Isiphumo yile tattoo emangalisayo. Ukuchukumisa umbala kunokuba kuhle kakhulu, ngakumbi ukuba uyaphefumlelwa, umzekelo, ngamaxesha onyaka onyaka.
Iingelosi ezixubileyo kunye needemon
Xa kuziwa ekumeleni iitattoos zeengelosi needemon kukho iindlela ezininzi kunye nezinye iindlela. Sinokubakho kumvambo wophiko lwengelosi kunye nephiko leedemon, ngelixa sinokukhetha ukubamba idabi phakathi kwala maziko. Kwaye kubathandi bokwenyani, kuhlala kukhethwa ukubandakanya ukumelwa kunye nomfanekiso wenkolo yobuKristu kulusu.
Kodwa ayisiyiyo yonke into eyenzeka ngesithunywa okanye idemon, njengoko besesitshilo ngaphambili. Kukho abo bakholelwa ukuba bangazifumana zombini, kuba abantu abayonto inye okanye enye, thina asimnyama okanye mhlophe, kodwa kunoko singumthunzi ongwevu onokwahluka ngokwangoku.
Ngenxa yoko, inokumelwa ngeetatoo ezimbini, ingelosi kunye nedemon. Kuyinto enomdla, kuba yinto ephindaphindayo kwiikhathuni ezininzi, apho omnye wabalinganiswa ehendwa ngumtyholi ngelixa ingelosi encinci emxelela ukuba angayenzi.
Siyathemba ukuba eli nqaku ngengelosi nakwiidemon ziyakukhuthaza ukuba ufumane uyilo olugqibeleleyo. Khawusixelele, unayo itattoo enje? Ngaba kukho uyilo oluthandileyo? Sitshele ukuba ufuna ntoni kwizimvo!
Iifoto zeengelosi kunye needemon iiTattoos
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuzoba » Iindidi zeetattoos » IiTattoos zonqulo » Iingelosi kunye needemon iiTattoos
Iitattoos zikaDaisy: ingqokelela yoyilo kunye neentsingiselo